Articles About Zimbabwe - Page
Home>Category: "Articles of Zimbabwe"
Harare - capital of Zimbabwe beautiful capitalZimbabwe, Harare city, famous for the fact that, firstly, the population has reached the two million mark and continues to grow with each passing day. The second feature of this metropolis - ...
Zimbabwe Flag photo, history, meaning of colors of the state flag of Zimbabwe
Zimbabwe Flag State flag of the RepublicZimbabwe was first raised officially in April 1980, when the country won the parliamentary victory of the African National Union and the hostilities ceased. Description and proportions ...
Airports Zimbabwe This country on the blackthe continent has managed to preserve the pristine nature of Africa, and because, despite the long and not cheap flight, fly here on tours and safari Russian tourists. Airport ...
Zimbabwe Coat of Arms Beautiful sultry Africanthe country seeks to enter on an equal footing among the world countries. And among the first steps to self-determination - the introduction of official symbols. However, the coat of arms of Zimbabwe appeared on the half ...
Zimbabwe traditions of Russian travelers allconfidently master the black continent, and because tour operators often hear a request to pick up a trip to an African country. Here fly lovers of exotic and safari fans of authentic ...
Prices in Zimbabwe On average, prices in Zimbabwe moderate: milk is $ 1/1 liter, eggs - 1.2 $ / pc 10, and lunch in a cheap cafe - $ 7-8.. Shopping and souvenirs ...